TIGERNU, Famoronana vaovao, zipper tena malama
Ny tompon'ny TIGERNU, MR .Qian, dia mifantoka hatrany amin'ny fanavaozana ny zipper, satria ny zipper an'ny kitapo no ampahany lehibe indrindra amin'ny kitapo iray. Izahay no mpanamboatra voalohany nanonona ny hevitra fanoherana ny halatra any Shina, ho an'ny kitapo kitapo finday, ankoatry ny fiarovana iraisana amin'ny fifangaroana ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-05-15
TIGERNU dia nanolotra kitapo ho an'ny hopitaly teo an-toerana tamin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny mpitsabo mpanampy, faha-12 Mey, mankasitraka fatratra ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy rehetra izay miezaka manatanteraka ny asa famonjena velona COVID-19 any Wuhan .ny faritra misy toe-javatra faran'izay mafy. Rehefa miresaka ny iraky ny orinasa iray isika, ny valiny ...
Inona no nitranga nandritra ny fotoana manokana?
TIGERNU dia marika kitapo malaza any Shina, ary izy no mpanamboatra voalohany any Sina nametraka ny hevitry ny kitapo fanoherana ny halatra. Hatramin'ny nipoahan'ny virus coronavirus dia nandray ny fepetra mahomby izahay hiantohana ny famatsiana maika ny tsenantsika lehibe. Amin'izao fotoana izao, ny fahaizan'ny famokarana dia ...
Olana mafana ara-tsosialy
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-03-19
TIGERNU dia nanomboka nifanesy nifandimby tato ho ato, ary nampihatra tamim-pahamatorana ireo fepetra takiana amin'ny sampan-draharahan'ny Fisorohana Virus any Guangzhou, ary nanatanteraka ny fizahana ny mari-pana, ny fanadiovana ary ny famonoana otrikaretina ary ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiasa nohavaozina. Ny bokikely fisorohana Coronavirus i ...
TIGERNU dia tompon'andraikitra amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa, miatrika mora foana ny olan'ny asa mandritra ny ady amin'ny virus Corona .Staff samy miasa ao an-trano.
TIGERNU dia tompon'andraikitra amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa, miatrika mora foana ny olan'ny asa mandritra ny ady amin'ny virus Corona .Staff samy miasa ao an-trano. Mba hamahana ny olan'ny asa alohan'ny manomboka miasa any amin'ny birao, TIGERNU dia nanapa-kevitra ny hampandre ny torolàlana farany momba ny Virus avy amin'ny governemanta eo an-toerana, noho ...